नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नवराज सिलवाल भलै गलत नै होलान रे, तर यो त अति भएन र ??
नवराज सिलवाल भलै गलत नै होलान रे, तर यो त अति भएन र ??
यो त अति भएन र ?? : नवराज सिलवाल भलै गलत नै होलान रे ! गलत छन भने नियमानुसार कार्वाही गर्नुपर्छ, गरछबिलाल सरकारको प्रहरी प्रशासनले उनलाई जे जसरी पक्राउ गर्ने, मानसिक यातना दिने काम गरिरहेको छ यो कानुनी र न्यायिक प्रणाली माथिकै उपहास हो । नेपाल प्रहरी सक्छौ भने सर्बोच्च अदालतले सर्बस्व सहित जन्मकैद सुनाएका बालकृष्ण ढुँगेल र उनी जस्ता बालुवाटार वरिपरी रहने फरार अपराधी लाई समात । सिलवाल त फरार त छैनन नि होइन र ??
सिलवालबाट पीडित हुँ भन्ने बसन्त भुजेलको दाबी यस्तो छ ! यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने हो कि !